एनएमबी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्दै, साढे ८ प्रतिशत ब्याज पाइने :: Setopati
एनएमबी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्दै, साढे ८ प्रतिशत ब्याज पाइने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख २४
एनएमबी बैंकले जेठ २ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले कुल २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो।
जसमध्ये १२ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट र ८ लाख कित्ता सामुहिक लगानी कोषसहित सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिनेछ।
प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १ हजार रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणले न्यूनतम २५ कित्ता अर्थात २५ हजार रुपैयाँको आवेदन दिन सक्ने छन्।
छिटोमा जेठ ५ गतेसम्म र सो अवधिमा सम्पूर्ण रुपमा विक्री नभएमा १६ गतेसम्म आवेदन खुल्ने बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ।
आफ्नो खाता भएको आस्बा सदस्य जुनसुकै बैंकको शाखामार्फत र मेरो सेयरमार्फत समेत यसमा आवेदन दिन सकिनेछ।
यो ऋणपत्रमा लगानी गरेवापत लगानीकर्ताले वार्षिक ८. ५० प्रतिशत ब्याज पाउने छन्। प्रत्येक ६–६ महिनामा यस्तो ब्याज भुक्तानी हुन्छ। हाल चलनचल्तीमा रहेको वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल यसमा पाइन्छ।
१० वर्षपछि मात्रै साँवा र अन्तिम ब्याजको किस्ता प्राप्त हुनेछ।
ऋणपत्रमा लगानी गर्दाको फाइदा के ?
ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि तोकिएकै अवधिसम्म स्थिर रुपमा तोकिएको ब्याज पाइन्छ। अर्थात बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन पाउँदैनन्।
बैंकको नाफा, घाटा, चलनचल्तीको ब्याजदर जेसुकै भए पनि ऋणधनीलाई तोकिएको ब्याज दिइरहनु पर्छ। ऋणपत्रको साँवा रकम भुक्तानीका लागि बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिनुअघि नै कोषमा रकम सार्दछन्।
यस्तो ऋणपत्र धितो राखेर सम्वद्ध बैंकबाहेक अरु बैंकबाट ऋण पनि लिन पाइन्छ। सेयरमा भन्दा ऋणपत्रको जोखिम कम हुन्छ। कम्पनीहरु नाफामा गएपछि मात्रै सेयरधनीले लाभांश पाउने हुन्।
तर सेयरधनीलाई लाभांश दिनुपहिले नै ऋणपत्रधनीलाई ब्याज छुट्याइन्छ। कम्पनी नोक्सानमै गए पनि ऋणपत्रधनीलाई ब्याज र साँवा चुक्ता गर्नुपर्छ। तसर्थ ऋणपत्रको जोखिम ज्यादै न्यून हुन्छ।
धितोपत्र बजार ९नेप्से० मा ऋणपत्र खरिदबिक्री गर्न पनि पाइन्छ। तर खरिद गर्नेहरु नहुँदा बजारमा सितिमिति ऋणपत्रको कारोबार भएको पाइँदैन। यदि खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवै पक्ष तयार भएमा दोस्रो बजारबाट खरिदबिक्री हुन सक्नेछ।
सेयरमाजस्तो साधारणसभामा भाग लिने अधिकार भने ऋणपत्रधनीलाई हुँदैन। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले पान नम्वर खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २४, २०७८, १३:०९:०१
एक कदम उक्लिँदा तीन कदम ओर्लिएको सेयर बजार, फसिएला है ‘ट्रयाप’मा
सर्बोत्तम सिमेन्टको साधारण सभा सम्पन्न
खुल्यो जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ, प्रतिसेयर आम्दानी नै १ सय रुपैयाँभन्दा बढी
सेयर बजारको परिसूचकसँगै घट्यो कारोबार, होटल तथा जलविद्युतमा बहार
‘प्रिओपन’ सेयर कारोबारमा अब कम्पनीको मूल्य २ प्रतिशतभन्दा धेरै घटबढ नहुने
हिमालयन बैंकका ग्राहकले दराजबाट सामान किन्दा १५ प्रतिशत छुट पाउने